Isebenza njani ifestile yokuHamba ku Windows 10?
Jonga ezona desktops zokwenyani, Windows 10 uqokelela izinto zePC zakho ezisetyenziswa rhoqo kwaye uzibeke kufutshane kwiPaneli yokuKhangela, eboniswe apha.
Ipaneli yokuKhangela ibonelela ngeendlela ezimfutshane kwiindawo ozindwendwela rhoqo.
Ifunyenwe ngakwicala lasekhohlo kwifolda nganye, ifestile yokuKhangela inamacandelo aphambili: Ukufikelela ngokukhawuleza, i-OneDrive, kunye nale PC. (Kwii-PC ezixhumeke kwinethiwekhi, uya kubona kwakhona ukungena kwiNethwekhi kunye neQela laseKhaya.) Cofa naliphi na kula macandelo - Ukufikelela ngokukhawuleza, umzekelo - kwaye icala lasekunene lefestile likubonisa ngokukhawuleza imixholo yento oyicofileyo.
Nantsi inkcazo eneenkcukacha malunga nenxalenye nganye yeFestile yokuKhangela:
Ukufikelela ngokukhawuleza: Ngaphambili kwakubizwa Iintandokazi, ezi ndawo zisebenza njengeendlela ezimfutshane zokucofa kwiindawo zakho ezifumaneka rhoqo kwiWindows.
iziphumo ebezingalindelekanga zebuprofen 800 milligrams
Desktop: Idesktop yakho yeWindows, uyikholelwe okanye ungakholelwa, eneneni yincwadi eneenkcukacha ehlala isasazeka evulekileyo kwiscreen sakho. Ukucofa kwiDesktop ngokukhawuleza kubonisa imixholo yedesktop yakho.
Ukhuphelo: Cofa le ndlela imfutshane ukuze ufumane iifayile ozikhuphele kwi-Internet Explorer ngelixa ukhangela i-Intanethi. Ewe, kulapho baphelela khona!
Amaxwebhu: Ukuthanda okungapheliyo, le folda igcina uninzi lomsebenzi wakho: amaspredishithi, iingxelo, iileta, kunye nezinye izinto ozenzileyo.
Imifanekiso: Enye indawo edumileyo, oku kukuthatha kwiifoto ozifotileyo okanye ozigcine kwi-Intanethi.
I-OneDrive: Indawo yokugcina simahla ekwi-intanethi uyinikwe nguMicrosoft xa usenza iakhawunti yeMicrosoft. Ngenxa yokuba ikhuselwe ngephasiwedi kwaye ikwi-Intanethi, iyalinga ukuyizalisa ngeefayile ozithandayo zokufikelela nakweyiphi na iPC. Xa iifayile zakho ezigciniweyo zifikelela ngaphezulu kwe-15GB, uMicrosoft ucela ikhadi lakho letyala ukuphakamisa umda wokugcina.
Jonga izibonelelo ezikhethekileyo zokunyusa indawo yokugcina yasimahla. Umzekelo, xelela i-smartphone yakho ukuba igcine iifoto zayo kwi-OneDrive ukufumana indawo yokugcina eyongezelelweyo.
Le PC: Eli candelo likuvumela ukuba ukhangele kwiifolda zePC kunye nokuqhuba kanzima. (Uninzi lwezi ndawo zihlala zisetyenziselwa ukugcina zihlala kwindawo yokuFikelela kwiNdawo yokuFikelela ngokukhawuleza, ngokunjalo.) Eli candelo lePC ligcina le mimandla:
Desktop: Cofa oku ukuze ubone iifayile kunye neefolda ezigcinwe kwidesktop yakho. (Okanye, ungavala nje ifolda kwaye ubone idesktop yakho buqu.)
Amaxwebhu: Oku kuvula ifolda yamaxwebhu, indawo yokugcina oonobumba, iifom kunye neengxelo.
Ukhuphelo: Ukhuphele ifayile kwi-Intanethi Explorer? Emva koko jonga apha ukuze uphinde ubuyiselwe.
Umculo: Ewe, le ndlela imfutshane itsibela ngqo kwifolda yoMculo, apho ucofa kabini kwingoma uyiqala ngokudlala ngezithethi zePC yakho.
Imifanekiso: Le ndlela imfutshane ivula ifolda yemifanekiso yakho, indawo yokuhlala yazo zonke iifoto zakho zedijithali.
IiVideos: Cofa apha ukuze undwendwele ifolda yeVidiyo, apho ucofa kabini kwividiyo uyivula ukuba ubukele kwangoko.
IDiski yeNgingqi (C :): Ukubambelela kwiiteki ezindala, oku kungena kukuvumela ukuba ukhase kuyo nayiphi na incwadi eneenkcukacha kwiPC yakho. Ngaphandle kokuba uyazi ngokuthe ngqo ukuba yeyiphi na into oyifunayo, ngekhe uyifumane. Hlala kwezinye iindawo, endaweni yoko.
Ngaba ibuprofen iyafana netylenol
Iidrive Drives: Ukuba iPC yakho ibandakanya ii-disc ezongezelelekileyo, ii-icon zabo bavela apha, ngokunjalo. Faka i-flash drive kwizibuko le-USB, kwaye i icon yayo iyavela apha.
Inethiwekhi: Nangona amaqela asekhaya enza lula ukwabiwa kwefayile, iinethiwekhi zesikolo esidala zisasebenza, kwaye naziphi na iiPC ezinothungelwano- kubandakanya abahlobo bakho beQela lasekhaya- zivela apha.
Iqela lasekhaya: Indlela elula yokwabelana ngolwazi phakathi kweekhompyuter ezininzi zekhaya, Amaqela asekhaya zii-PC ezimbini okanye nangaphezulu ezabelana ngolwazi ngenethiwekhi elula. Cofa iqela lasekhaya kwiFestile yokuKhangela ukuze ubone iifolda ekwabelwana ngazo zii-PC ezithile zenethiwekhi kwiqela lakho lasekhaya.
Nazi iingcebiso ezimbalwa zokwenza uninzi lwepaneli yakho yokuKhangela:
Ukuthintela ukubuyela umva kwimenyu yokuQala, yongeza iindawo zakho ozithandayo kwindawo yokuFikelela kwiPaneli yokuFikelela eKhawulezayo: Cofa ekunene kwifolda kwaye ukhethe iPin kuFikelelo olukhawulezayo kwimenyu ephumayo.
Ukuba uqhagamshele kwinethiwekhi ekhaya okanye emsebenzini, ipaneli yecandelo lePC linokubandakanya ezinye iikhompyuter zomculo, ividiyo kunye neefoto (ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuzo njenge isiqingatha ). Cofa ii icon zeekhompyuter ukufikelela kwezi zinto ngokungathi zigcinwe kwikhompyuter yakho.
Windows 7 abanini banokuqaphela ukuba Windows 10 ayibonisi iilayibrari kwiPaneli yokuKhangela. Amathala eencwadi asekhona, kodwa afihliwe ngasemva. Ukubabuyisela kumbono, cofa indawo engenanto kwiFestile yokuKhangela kwaye ukhethe Veza iilayibrari kwimenyu ephumayo. (Kuya kufuneka ukongeze ngokwakho iifolda zikaRhulumente kwithala leencwadi ngalinye ukuze uzibuyisele kwiintsuku zewindows zeWindows 7.)
Imiphumo emibi yeti
c 74 ipilisi epinki
i-rimadyl ehlafunwayo ye-100 mg
Mag oxide 400 mg
umqala obuhlungu kunye nomva wolwimi